International Youth Day (Kayin) - Nyein (Shalom) Foundation
Let’s Make Just Peace A Reality…
မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်နှင့် ရပ်တည်ချက်
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အကြံပေးအဖွဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး ဂေဟာ (နောင်နန်း)
International Youth Day (Kayin)
ကရင်ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ရှိ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံ လူငယ်များလည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ပြည်နယ်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါသည်။
International Youth Day in Kayin State, August 17, 2019
(၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေ့အား အခမ်းအနားဖြင့် ဂုဏ်ပြုရန်၊
(၂) ယခုနှစ် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ပညာရေးစနစ်အပေါ် လူငယ်များအနေဖြင့် တန်းတူပါဝင်နိုင်ရေး၊ သာတူညီမျှမှုရှိရေး၊ လူငယ်များအားလုံး အကျုံးဝင်နိုင်ရေးနှင့် ပါဝင်နိုင်ရေးကို လူငယ်များက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အားထုတ်လုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် အားပေးလှုံ့ဆော်ရန်၊
(၃) မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်မှ လူငယ်အစုအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် စသည်တို့ကို ရည်ရွယ်လျက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဖိတ်ကြားထားသည့် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ ဟောပြောဆွေးနွေးမှုများ၊ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အောင်မြင်ထင်ရှားသော လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လူငယ်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှု စကားဝိုင်းများနှင့်အတူ လူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြပွဲ (Talent Show) များ၊ လူငယ်ရေးရာ ပြခန်းများ စသည့် အခင်းအကျင်းများ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခမ်းအနားသို့ လူငယ်အစုအဖွဲ့များအနေဖြင့် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ အပါအဝင် မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်မှ လူငယ်အစုအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အပါအဝင် တက္ကသိုလ် (၃)ခုမှ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးစင်တာမှ လူငယ်များ၊ ဘာသာရေးအခြေပြု လူငယ်အစုအဖွဲ့များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် တက်ရောက်သော လူငယ်များ စသည်အားဖြင့် လူငယ်များ (၈၀၀)ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံ လူငယ်များသည်လည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
Singing Ceremony - Sub-Grant Agreement with CSO Partners for Community Peace Support (CPS) Project
IYCAP Project Orientation
HRCPF Committee Handover Meeting
Cooking Show - IYCAP (Yangon)
Celebrating Religious Festival/Christmas - IYCAP (Yangon)
အမှတ်-၉၉(အေ)၊ အခန်းအမှတ် (၈-စီ)၊ ရွှေပိတောက်ကွန်ဒို၊ မြေနုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁ ၅၁၀ ၄၈၇
အမှတ် - ဂျီ ဒီ ၉၀၊ စီတာပူရပ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၇၄ ၂၅ ၂၃၉၈၇
အမှတ် - ၃၉၁ (ခ)၊ သီရိဒေါလမ်း၊ နောင်ယား (က) ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၅၆၀၀ ၉၇၁
အမှတ်(၉/၃၉၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ရတနာဒီပ၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
ဖုန်း - ၀၉ ၇၉၇ ၁၄၅ ၅၇၇
အမှတ် (၁၀၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၄ ၂၀၀၀ ၈၉၄
အမှတ် (၂၈၀)၊ မြိုင်သာယာလမ်းနှင့် (၄) လမ်းထိပ်၊ မြိုင်သာယာရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၅ ၃၆၃ ၇၈၁
၁၁ မိုင်၊ နောင်နန်းကျေးရွာ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
09 771 697 740
© 2019 Nyein (Shalom) Foundation. All Rights Reserved. Created by